Wararka Suuqa: Donnarumma, Kenedy, Gudmundsson, iyo Neymar | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Wararka Suuqa: Donnarumma, Kenedy, Gudmundsson, iyo Neymar
Wararka Suuqa: Donnarumma, Kenedy, Gudmundsson, iyo Neymar
Waxaa idin soo xulay wararka suuqa kal iibsiga kuwooda ugu xiisaha badan ee Wargeeysyada caalamka ay qoreen.
Hadaba Hoos Kaga Bogo Wararka ugu Waaweyn Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda:
Weeraryahanka Tottenham Harry Kane ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid dhamaadka xaagan, laakiin 24 jirkaan ayaa sheegay inuu sii joogi doono Spurs, madaama uu “sugi la’yahay inuu goolal fara badan ka dhaliyo garoonkooda cusub”. (Telegraph)
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa u sheegay Real Madrid inuu ka fekerayo inuu raadiyo ciyaaryahan kale oo goolhaye ah isagoo aaminsan in David de Gea oo 27 jir ah uu sii joogi doono. (Express)
Liverpool iyo Manchester United ayaa ku rajo weyn inay lasoo saxiixdaan daafaca kooxda Lazio Stefan de Vrij, oo 26 sanno jir ah, xiddigan ayaa weli laga yaabaa inay Inter Milan ku guuldareysato inay xaqiijistaan ​​saxiixiisa daafaca reer Holland oo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkaan. (Star)
Chelsea ayaa isha ku heysa goolhayaha AC Milan Gianluigi Donnarumma oo 19 jir ah, hadii uu ciyaaryahankan Thibaut Courtois oo 25 jir ah ka tago Stamford Bridge. (Corriere dello Sport, via Talksport)
Newcastle ayaa isku dayi doonta inay heshiiska amaahda ah ay kula jiraan xiddiga garabka uga ciyaara Chelsea ee Kenedy inay ka dhigaan mid joogta ah, laakiin waa inay ka bixiyaan 15 milyan oo ginni 22 jirkaan reer Brazil. (Mirror)
Juventus ayaa ka walwalsan inay seegi karaan saxiixa xiddiga qadka dhexe ee Liverpool Emre Can, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedka, iyadoo Bayern Munich iyo Real Madrid ay sidoo kale xiiso u qaban saxiixa 24 sanno jirka heerka caalami ee dalka Jarmalka. (Express)
Newcastle, Leicester iyo Southampton ayaa dhamaantood xiiseynaya 27 jirka Burnley iyo xulka Icelandeerarka kaga ciyaara ee Johann Berg Gudmundsson. (Sun)
Barcelona ayaa heshiis la gaartay bishii lasoo dhaafay si ay ula soo saxiixato weeraryahanka reer France Antoine Griezmann oo 26 jir ah, iyadoo Atletico Madrid ay ku guul darreysatay inay qandaraaska u kordhiso heshiiskiisa. (Le10sport.com – Faransiis)
West Brom waxay dooneysaa maamule Alan Pardew inuu ku sii negaado doorkiisa kooxda, laakiin waxay qorsheynayan inay magacaawadaan macalin cusub xagaaga markuu dhamaado. (Mirror)
Arsenal ayaa isha ku heysa macalinka Juventus Massimiliano Allegri ka dib markii uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu tababare u noqdo Gunners kadib kulankii ay Tottenham ka ciribtireen Champions League. (Star)
Ilwaad Elman oo ka mid noqotay lataliyayaasha Guturres.
Lionel Messi oo xalay dhaliyay goolkiisii 100-aad ee Champions League.
Real Madrid Oo £ 142 Milyan ku dooneysa Mohamed Salah.
Barcelona oo xasuuqday Chelsea Bayer Munich oo si fudud kusoo dhaaftay Basiktas iyo Kulamadii xiisaha badnaa ee laga ciyaaray Champonis Leaque.
Hordhac: Barcelona vs Chelsea iyo Shaxda Macquulka ah